PressReader - Isolezwe: 2019-01-11 - Abantu abafunde ukulawula isikhwele sabo
Abantu abafunde ukulawula isikhwele sabo
Isolezwe - 2019-01-11 - IMIBONO -
MASOLEZWE ngiyafisa ukuthi ngithi nginifisela unyaka omusha onezibusiso kodwa ngibona kufanele ngizithulele ngoba kade nganginifisela iminyaka enempumelelo kodwa ningaphumeleli. Okuyikona okwenza ngingasathandi ukwenza izifiso zonyaka omusha wukuthi sekungicacele ukuthi unyaka awuhambi ngokwezifiso zabantu. Ngikhumbula ukuthi eminyakeni eyedlule ngangize ngibambe ibhande ngikhulekela ukuthi unyaka ungiphathe kahle kodwa ugcine ungiphoxile. Kuyo yonke le minyaka eyedlule ngilwa nenkinga yokuthi ngihlaselwa yizikweletu zomashonisa kuqala unyaka uze ucishe uyophela.
MaSolezwe ngicela ningivumele ukuthi ngivule lo nyaka u-2019 ngokuthi nginihabulise ngokuthi isikhwele sidabuka kuphi. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi abantu abaningi abaqondi ukuthi isikhwele siyini nanokuthi sisebenza kanjani uma sesivunguza emqondweni nasenhliziyweni yomuntu. Ngokomthetho isikhwele singumona omuhle, lapho umuntu efisa ukuthi umuntu athandana naye kube ngowakhe yedwa. Okufike kube yinkinga ngesikhwele wukuthi siphenduka kalula sibe wumona omubi, lapho umuntu esefuna ukukhuleka omunye ameluse njengembuzi ngenxa yovalo lokuthi uzoqoma noma uzoqonywa.
Kule ngosi yanamuhla ngifisa abantu bazi ukuthi indaba yesikhwele indala isukela emithethweni eyishumi yaseBhayibhelini. Uma ufunda imithetho eyishumi yeBhayibheli kuvele kucace ukuthi nguNkulunkulu uqobo lwakhe owasungula isikhwele. Lokhu kunikeza impendulo yokuthi bonke abantu abanesikhwele bafuze uNkulunkulu ngoba wabadala ngomfanekiso wakhe. Mina ngize ngimangale ukuthi uNkulunkulu wayesesukwe yini esevukwa yisikhwele esikhulu kangaka ngathi sengathi kunonkulunkulwana esasithe sizobakhonza emakhoneni. Umoya wesikhwele uzwakala kahle kulo mthetho wakhe othi: “Ungabi nabanye onkululunkulu ngaphandle kwami”. Kulo mthetho uyamuzwa uJehova ukuthi wayengahleki wayehlinile ethi akafuni simjolele simshebanise nonkulunkulwana bethu.
Uma uzakhela isithombe emqondweni uyabona ukuthi uNkulunkulu wayesikhomba ngomunwe uma ethi: “Ningaliphathi ngeze igama lami”. Thina zinto zoVolos kuyasicacela ukuthi uJehova washesha wabona ukuthi siyogcina sesiphuza ogologo sidakwe sigcine sesiliphathe ngeze igama lakhe. Uma ujula ubuka le mithetho kaNkulunkulu kuyakucacela ukuthi nabantu bamfuzile ngesikhwele nale mithetho ethi: “Ungabi namanye amadoda ngaphandle kwami noma ungabi nabanye abafazi ngaphandle kwami”. Inkinga yesikhwele sabantu wukuthi sihambisana nodlame olugcina lukhiphe izidumbu kodwa isikhwele sikaNkulunkulu sihambisana nomusa wokuxolela uma umuntu eguqula ukwenza kwakhe.
MaSolezwe okaVolos akaceli khona ukuthi abantu bayeke isikhwele kodwa uthi kufanele baqaphele bangabi nesikhwele esikhulu esedlula esikaNkulunkulu okunguyena uMdali wesikhwele. UNkulunkulu owasungula isikhwele asikaze sizwe kuthiwe usebulele abantu ngoba beliphathe ngeze igama lakhe. Siyacela ukuthi umuntu nomuntu azame ukulawula isikhwele sakhe ngoba kuyichilo ukuthi umuntu abulale umuntu athandana naye ngenxa yokuthi wehlulwe ukulawula isikhwele.